Home Wararka Gudiga Aqalka Sare oo laalay sharciga shidaalka iyo qorshaha Xasan Kheyre
Gudiga Aqalka Sare oo laalay sharciga shidaalka iyo qorshaha Xasan Kheyre
Gudiga Aqalka Sare ee loo xilsaaray turxaan bixinta sharciga Shidaalka oo horay si ku saleysay musuq-maasuq loo mariyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka horyimid qaabka sharciga shidaalka loo qoray iyo qodobada uu xanbaarsan yahay kuwaas oo khatar ku ah jiritaanka qaranimada umadda Soomaaliya.
Xubno ka tirsan gudiga oo ku shiray dalka dibadiisa ayaa isbadal wayn ku sameeyay dhamaan qaybo ka mida sharciga iyaga oo dib ugu celin doono golaha Shacabka si ay ugu doodaan una codeeyaaan isbdalka lagu sameeyay sharciga.
Talaabadan waafaqsan sharciga oo ay qadeen Gudiga Aqalka Sare ayaa waxa ay dhabar jab ku tahay qorshaha ku salysan qiyaanada ee uu Xasan Kheyre ku doonayay in uu shidaalka Soomaaliya gacanta u galiyo wadamo iyo shirkado shisheeyo oo uu isagu saami ku leeyahay.
Aqalka Sare ayaa u muuqda mid ay ka go’an tahay in ka hortagaan dhaca qorshaysan ee la doonayo in loogu geysto kheyraadka Umadda Soomaaliyeed. Talaabadanina waxa ay soo celinaysaa kalsoonida umadda Soomaaliyeed ee Baarlamaanka Soomalaiya, kaas oo horay u lumiyay kalsoonada umadda Soomaaliyeed, sababtoo Baarlamaanka ayaa isku badalay hay’ad u adeegta Xasan Kheyre iyo Farmaajo oo ay ka go’an tahay in dhacaan Kheyraadka dalka inta aan la gaarin doorashada 2021.